ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းက ရွာလေးတွေဆီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းက ရွာလေးတွေဆီ
Posted by အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ/ သန်းထွဋ်ဦး on May 27, 2012 in Local Guides, Photography, Travel | 29 comments
၀ ကိုးလုံးအဓိဋ္ဌာန် စေတီတော်(ကင်းပုံရွာ-ကမ်းသာယာ)
ရခိုင် တောင်ပိုင်းကမ်းခြေအလှတွေထဲက တစ်ခုပေါ့
အားပေးသွားပါတယ် ကိုနာဂရေ ..
ချောင်းနံဘေးက စေတီလေး ဆိုတဲ့ ပုံကတော့ အကြိုက်ဆုံးပဲ ..
အဲဒီပုံကို ရိုက်တုန်းက လေတွေတော့ တိုက်နေမယ် ထင်တယ်ဗျ …
ဒါနဲ့ သဘာဝ ဂူပေါက် ထဲကို ဝင်သွားပြီး ဘုရားကို ဖူးရတာလားဗျ …
ချောင်းနံဘေးက စေတီလေးနဲ့ ကမ်းခြေလေးလှတယ်။ အားပေးသွားတယ်နော်။
သဘာဝ ဂူပေါက်ထဲကို သွားကြည့်ချင်တယ်…
ကျဉ်းကျဉ်းလေးပဲလား…အဲဒီထဲမှာ နေရာက အဲဒီလောက်ပဲလား….
ညစ်နေတာတွေအားလုံး ပင်လယ်ရေနဲ့ ဆေးပစ်လိုက်ချင်တယ် ဟီးဟီး
သဘာဝဂူပေါက်ထဲက လျောင်းတော်မူ ဆင်းတုတော်ပါ၊
ဂူထဲက ဘုရား တော်တော် များများထဲမှာ ပက်လက် ပုံ ကို ဒီတစ်ခါ ပဲမြင်ဖူးတယ်။ တစောင်း ကတော့ မြင်နေကျ ဗျ။ မှတ်ထားရမယ့် နေရာ လေးပဲ … ကျေးဇူးပါဗျာ။
တစ်ရက်ထဲနဲ့ မကွေးနဲ့ ရခိုင် ရောက်ဖူးသွားရတယ်ဗျာ ။ ခရီးသွားရရင် အသက်ရှည်ကိုယ်နု စိတ်ပျို သတဲ့ ။
ှုကိုသန်းထွဋ်ဦး ကမ်းသာယာ ဟိုတယ် ရှေ့ ၀င်မရိုက်ခဲ့လို့ ။ ကမ်းသာယာ ဟိုတယ်ရှေ့ က သဲသောင်ပြင်လည်း တော်တော်လှတယ် ။ ရန်ကုန်ဘက်က လာရင် ကမ်းခြေဘက်ကနေ လမ်းပါတ်တက်လာပြီး ပင်လယ်ကို ဘွားကနဲ တွေ့ ရတာ အရမ်းလှတယ် ။ ပင်ပန်းလာသမျှ အမောပြေစေတယ် ။
ဟိုတယ် က တော့ ဦးပိုင်ဖြစ်ပြီး နာဂစ်ထိထားတာ ပြန်မပြင်တော့ စုတ်ပြတ်နေပြီ ။ တကယ်တမ်းကားလမ်းကောင်းရင် ရန်ကုန်ကနေ ၆ နာရီလောက်ဘဲကြာမှာ ။ ကားလမ်းမကောင်းလို့ မတိုးတက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။
ကမ်းသာယာ ဟော်တယ်တွေကစုတ်ပြတ်သတ်နေပါပြီ။ ကျွန်တော်မှာမနှစ်ကရိုက်ခဲ့တဲ့ ပုံတွေရှိပါတယ်။ ကိုhtoosan ပြောတဲ့ အကွေ့က “ရေမြက်တောင်” လို့ခေါ်တဲ့ နေရာပါ။ လောင်းကျိုးကျေးရွာနဲ့ ကမ်းသာယာ ကြားပေါ့။ လမ်းလေးကကျဉ်းပါတယ်။ တောင်ပေါ်ကမြေတွေ ကျောက်တုန်းတွေလဲ မကြာမကြာပြိုကျ တပ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ရူခင်းကတော့ အရမ်းလန်းပါတယ်။ အဲ့အကွေ့ကိုကျော်လိုက်တာနဲ့ ကမ်းသာယာကိုရောက်ပါပြီ။ အရင်က ကမ်းသာယာ လို့မဖြစ်ခင်တုန်းက သာခွေးချိုင်ရွာပါ။ ခွေးပါနေလို့မကောင်းလို့ သာယာချိုင် (သို့)ကမ်းသာယာလို့ပြောင်းလိုက်တာပါ။ နောက် “ကလားပြင်ရွာ”ဆိုတာရှိသေးတယ် သူကိုတော့ ရတနာမြိုင်ပြောင်းတယ်။(ကုလားပြင်ဆိုတာ ကျိန္တလီမြစ်ကူးတံတား ရှိတဲ့ရွာပါ။ မြစ်ကူးတံတားက ကုလားပြင်နဲ့ ကိုင်းကုံ ကိုထိုးထားတဲ့တံတားပါ သံတွဲသွားရင် ဖြတ်ရမှာပါ။) နောက် ကုလားပုံးရွာ ကို ခရေတန်းဆိုပဲ ပြောင်းလိုက်ကြတယ်။ ကျွန်တော်တောင် မျက်စိတော်တော်လည်သွားတယ်။ နောက်ကမ်းသာယာနားမှာပဲ မော်ရွှေချိုင် ဆိုပြီးတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ ဓါတ်ပုံတွေကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တင်ပေးပါ့မယ်။
ကိုထူးဆန်းရေ. ကမ်းသာယာကို မရောက်ခင် ရေမြေ့တောင် ပတ်ကွေ့ အတော်လှတာကို သိပါတယ်။အားလုံးမြင်ရအောင် ဓါတ်ပုံရိုက်လာပေမယ့်
တချို့ ပျက်တဲ့ပုံတွေထဲပါသွားလို့ ပါဗျာ။အတော်နှမျောမိပါတယ်။နောက်တခေါက်ပြန်ရောက်ဖို့ ကလဲကြာအုံးမှာ။လမ်းခရီး အမြန်ကောင်းသွာ့းတောင် စည်ပင်လာမယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
သံတွဲတို့ ဂျစ်တော တို့ကိုတော့ ခဏခဏ ရောက်ခဲ့ပါရဲ့…
သံတွဲ ရေကြီးတဲ့နှစ်ကဆို ကျနော်တို့လည်း အဲမှာ ရှိတာပေါ့ဗျာ….
@marblecommetရေ သံတွဲရေကြီးတဲ့နှစ်ဆိုတော့ ၂၀၀၄လား၊၂၀၀၆လားဗျ။
@ဆရာထက်ရေ. ကျနော်တို့ ဆီလာလည်လှည့်ပါဗျာ။လိုအပ်ရင် ကျနော့်ဖုန်းကို
@MaEi ခင်များ ကွန်မန့် လေးနဲ့ အတူ သာယာတဲ့ စိတ်အေးချမ်းမှုရပါစေဗျား
ဟုတ်ကဲ့တောင်ဖက်နယ်သားပါခင်ဗျ။ ကိုသန်းထွဋ်ဦး ပေါင်းတာကပိုမှန်ပါတယ် marblecommet ရေ။ သံတွဲကတော့ မိုးအရမ်းရွာပြီးဆိုတာနဲ့ ရေကြီးတော့တာပဲနှော်။
ဟုတ်ကဲ့တောင်ဖက်နယ်သားပါခင်ဗျ။ ကိုသန်းထွဋ်ဦး ပေါင်းတာကပိုမှန်ပါတယ် marblecommet ရေ။ သံတွဲကတော့ မိုးအရမ်းရွာပြီးဆိုတာနဲ့ ရေကြီးတော့တာပဲနှော်။ ဓါတ်ပုံတွေကို ကျွန်တော်တင်ပေးပါ့မယ်
ရခိုင်ကို လာဖို့ ကျုပ် အားထုတ်နေပါတယ်
နွေရာသီကို သွားပေါ့။ သင်္ကြန်ဆိုရင်လဲ Hotel ကမတရားဈေးကြီးမယ်။ မိုးရာသီကိုတော့ရှောင်ပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်မိုးတွင်းဘက်သွားတုန်းကဆို ဂွရိုး ပေါ်မှာ ၂ မိုင်လောက် လမ်းလျောက်လိုက်ရတယ်။ (ဒါကလဲ တောင်ပျိုတာနဲ့ ကြုံလို့ပါ။)
ချောင်းနံဘေးက စေတီလေး နဲ့
@တောင်ဖက်နယ်သားဆိုလို့ ကိုယ်မိတ်ဆွေရင်းချာ တနယ်ထဲသားတွေမို့ ပြောစရာမလိုအောင်
@ကိုကြီးမိုက်ရေ အားပေးကြည့်ရှုတယ်ကြားရတော့ ကျေးဇူးပါခင်များ
လူတွေ အမှိုက်တွေမရှိတဲ့ သဘာဝကမ်းခြေတွေကပဲ လွပ်လပ်မှု အရသာကိုပေးနိုင်တယ်
လာလည်ပါဗျာ ။တကယ်ကို အရောက်အပေါက်နည်းတဲ့ ကမ်းခြေနေရာလွတ်
လျောင်းတော်မူ ဆင်းတုတော် ပုံစံက တော်တော်ထူးခြားတယ်။
အဲလို ပုံစံမျိုးတခါမှ မမြင်ဖူးဘူး။
ရခိုင်တောင်ပိုင်းဆိုတော့ ပြည်မနဲ့လည်း သိပ်မဝေးဘူး။
ဟုတ်ပါတယ် မမရေ။ကျနော့် ပုံလေး တွေက ဂွမြို့ နားက ရွာလေးတွေပါ။
ဧရာဝတီတိုင်း ငသိုင်းချောင်း မြို့ နဲ့ ဆို (၅၁)မိုင်ဘဲဝေးပါတယ်ဗျ။
အခုမှ ၀င်ကြည့်မိတယ်။ ဂူလေး ကျဉ်းကျဉ်းလေးမှာ ရအောင် ဘုရားတည်တယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်ကတော့ မသေးဘူး။
မမဆူးရေ. အတော့်ကို အနုပညာလက်ရာမြောက်ပါတယ်ဗျာ။
ဂူပေါက်ဝက ကျဉ်းပေမယ့် လူတစ်ကိုယ်စာ အေးဆေးဝင်ထွက်
က သူတော်စင်တွေ သီတင်းသုံးနေထိုင်ခဲ့တဲ့ ဂူလို့ ပြောပါတယ်
လျောင်းတော်မူ ဆင်းတုတော်က ဂူလေးကျဉ်းကျဉ်းမှာ
ရအောင် ဘုရားတည်ထားတာပဲနော် …
ပုံလေးတွေအတွက် ကျေးဇူးပါ ….
၇ခိုင်ဘက်တော့ ဆိုက်တွေ ဘူး သီးတောင် မောင်းတော ဘက်ဘဲ ရောက်ဖူးတယ် ဗျာ ..မလန်းပါဘူးဗျာ သွာရတာလည်းပင်ပန်း
တယ် တွေ့ ရတော့ လည်း ကုလားချည်း ဘဲ…မြင်မကောင်းဘူး..ကုလားပြည်ရောက်သလိုပါဘဲဗျာ…
စစ်တွေ မီးပြတိုက်နားလေး ဘဲ လှတယ် ဗျာ ကင်မရာ မပါလို့ မရိုက်ဖြစ်ပါဘူး..